बिज्ञान प्रबिधि – Page2– shubhabihani
Home / बिज्ञान प्रबिधि (page 2)	बिज्ञान प्रबिधि	नासाले सार्वजनिक गर्यो वृहस्पतीका नयाँ तस्वीर
165 Views अमेरिकी अन्तरीक्ष संस्था नासाले सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रह बृहस्पतीका नयाँ तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ ।
जूनो नामक भूउपग्रहबाट खिचिएका नयाँ तस्वीरहरु नासाले जारी गरेको हो । यी तस्वीरहरुमा वृहस्पतीको दुबै ध्रुवमा ग्यासका ठूला ठूला बादलहरु घुमिरहेको देखिने नासाले जनाएको छ । यसअघि वृहस्पती ग्रहका कुनैपनि तस्वीरमा यस्ता बादल देखिएका थिएनन् ।
गत जुलाई ५ मा वृहस्पतीको कक्षमा स्थापित भएसँगै जूनो नाम स्याटेलाइट पहिलोचोटी बृहस्पतीको नजिक नजिक पुगेर उक्त ग्रहका विभिन्न खाले तस्वीर तथा अनय जानकारीहरु संकलन गरेको छ ।
बृहस्पतीको उत्पत्ति तथा विकाशका साथै सौर्यमण्डलको रहस्य पत्ता लगाउनका लागि नासाले जूनो नामक भुउपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो । बृहस्पतीको कक्षमा रहँदा यो स्याटेलाइटले ग्रहको बनावट, तापक्रम, गति लगायतका तथ्यहरु पत्ता लगाउनेछ ।
यसले वृहस्पतीमा रहेको ठूलो धब्बा तथा त्यहाँ उठ्ने तुफानहरुका बारेमा पनि जानकारी संकलन गर्नेछ ।
जूनो अहिले एक अण्डाकार मार्गमा घुम्दै बृहस्पतीको नजिकबाट गुज्रिरहेको छ । यसलाई वृहस्पतीको एकपटक परिक्रमा गर्न ५३ दिन लाग्दछ ।
सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा जूनो बृहस्पतीमै नष्ट हुनेछ । त्यसअघि सम्म यसले यो ग्रहका बारेमा विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी जुटाउने विश्वास वैज्ञानिकहरुको छ ।
बजारमा आउँदैछन् यी ६ इलेक्ट्रोनिक कार, एक पटक चार्ज गरेपछि कुँद्छ ५०० किलोमिटर
303 Views बजारमा इलेक्ट्रोनिक गाडीको चर्चा बढ्न थालेका छन्। धुवाँ कम, प्रदुषण कम अनि गाडी चलाउने उर्जाको लागि डिजेल पेट्रोल नचाहिने, चार्ज गरे सरर गुड्ने, सन २०२० सम्म जनरल मोटर्स र फक्सवागन जस्ता कम्पनीहरुले विशुद्ध इलेक्ट्रोनिक कार बजारमा ल्याइसक्नेछन्।
टेस्ला मोडल ३यो कारको निर्माण २०१७ को अन्त्य देखि सुरु हुनेछ। यो कार एक पटक चार्ज गर्दा ३२१ किलोमिटरसम्म गुड्ने छ। यसले छ सेकेन्डमा ० देखि १०० किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पीड लिन सक्ने छ।
मर्सेडीज-बेन्जसन् २०१८ सम्म मर्सेडीज-बेन्ज कम से कम एउटा इलेक्ट्रोनिक कार लञ्च गर्ने लक्ष्यकोसाथ हिडेको छ। मर्सेडिज-बेन्जको प्यारेन्ट कम्पनी डेमलरसंग पहिले देखिने दुई इलेक्ट्रोनिक कार छ। यो कम्पनी आगामी पेरिस मोटर शोमा ५०० किलोमिटर प्रति चार्ज कुद्ने कारको प्रोटोटाइप पेश गर्ने सुरमा छ।
भोल्भोभोल्भोका सीईओ हकन सेमुल्सन अनुसार उनको कम्पनीले सन् २०२० सम्म ग्लोबल सेलमा १० प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रोनक गाडीले लिनेछ। सन् २०१९ सम्म कम्पनीले पहिलो इलेक्ट्रोनिक कार पेश गरिसक्नेछ।‍ कम्पनी २४० किमी प्रति चार्ज कुद्ने कार बनाउने तयारीमा छ।
फराडे फ्युचरआगामी चार वर्षमा फराडेले इलेक्ट्रोनिक कार बजामा ल्याउने बताएको छ। कम्पनीका सीईओ टेक इनसाइडले केही वर्षमा कम्पनीले आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रोनिक कार बनाइसक्ने बताएका छन्।
पोर्सेपोर्सेले आफ्नो मिशन ई कन्सेप्ट कार सन् २०२० सम्म बनाउन सुरु गर्नेछ। यो कार एक पटक चार्ज गरेपछि ५०० किलोमिटरसम्म गुड्नेछ र १५ मिनेटमा ८० प्रतिशत चार्ज हुनेछ। यसले ३.५ सेकेन्डमा ० देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन सक्नेछ।
जनरल मोटर्सले घोषणा गरेको छ कि उसले पहिलो सस्तो र लङ रेन्ज कारको निर्माण गर्नेछ। यो कारण २०१६ को अन्तसम्म उपलब्ध हुनेच। यसको रेन्ज प्रति चार्ज ३२१ किलोमिटर हुनेछ।
भेटियो पृथ्वी जस्तै अर्को ग्रह, बैज्ञानिक भन्छन्- एलियन पनि हुन सक्छन्
427 Views १० भदौ, एजेन्सी ।
बैज्ञानिकहरुले पृथ्वी समावेश रहेको सौर्यमण्डल भन्दा बाहिर नयाँ ग्रह फेला पारेका छन् । यो ग्रह अहिले सम्म खोजिएको ग्रह मध्ये सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक छ । आकार सानो भएपनि यो ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक छ ।
यसले सूर्यको सबैभन्दा निकट दुरीमा रहेको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरीलाई घुम्ने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । खगोलशास्त्रीहरुले लामो समय देखि प्रोक्सिमा सेन्चुरी तारामा एक ग्रह रहेको अनुमान गर्दै आएका थिए ।
बुधबार प्रकाशित जर्नल नेचरको रिपोर्टका अनुसार यो ग्रहमा एलियन्सको अस्तित्व रहेको सम्भावना समेत छ । सूर्यबाट करिव ४ दशमलव २५ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको ग्रहलाई अहिले ‘प्रोक्सिमा बी’ भन्ने नाम दिइएको छ । यसले प्रोक्सिमा सेन्चुरीलाई ११ दिनमा १ पटक घुम्छ ।
द वासिङ्टन पोष्टका अनुसार यो ग्रह पृथ्वीको तुलनामा १ दशमलव ३ गुणा ठूलो छ । सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको यो ग्रहमा विकिरणको मात्रा उच्च छ । यसको बाहिरी सतको तापमान ४० डिग्री फरेनहाइट हुन्छ ।
यो ग्रहको बारेमा अहिले सम्म प्राप्त जानकारी अनुसार यो ग्रह पृथ्वी, बुध र मंगल जस्तै पर्वतहरु मिलेर बनेको छ । यसमा अनुमान गरिए जस्तै पृथ्वीका गुणहरु भएमा अन्य प्राणीहरुको अस्तित्व समेत हुने अनुमान बैज्ञानिकहरुको छ । यस विषयमा बैज्ञानिकहरुले खोजि गररहेका छन् ।
कहीँ आफ्नो जिमेल लगआउट गर्न बिर्सनुभएको त छैन ? यसो गर्नुस्
204 Views कहिलेकाहीँ हामीले अरु कसैको स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा आफ्नो जिमेल अकाउन्ट लगइन गरेका हुन्छौँ ।
कहिलेकाहीँ साइबर क्याफेमा गएर समेत लगइन गरिन्छ र लगआउन गर्न भुलिएको हुन्छ । यसरी आफ्नो अकाउन्ट लगआउट गर्न बिर्सनु खतरनाक हुन्छ किनकी कसैले तपाइँको अकाउन्ट खोल्न सक्छ र तपाइँका महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नसक्छ ।
यस्तोमा जुन ठाउँमा गएर आफ्नो जिमेल अकाउन्ट लगइन गरेको हो सोही ठाउँमा पुनः गएर लगआउट गर्न कहिलेकाहीँ असम्भव पनि हुनसक्छ । तर चिन्ता नगर्नुस् तपाइँले कुनैपनि ठाउँमा लगइन गरेको आफ्नो जिमेल अकाउन्ट घरमै बसेर लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसका लागि आफ्नै घरको कुनै ल्यापटप वा डेस्कटप कम्पइुटरमा आफ्नो जिमेल अकाउन्ट लगइन गर्नुहोस् ।
जुन पेज आउनेछ त्यसमा स्क्रल गरी पेजको सबैभन्दा तल जानुहोस् । त्यहाँ दायाँतर्फ तपाइँले एउटा जानकारी देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ अन्तिम पटक तपाइँले कहाँ आफ्नो इमेल अकाउन्ट लगइन गर्नुभएको थियो भन्ने देखाउँदछ ।
त्यसका साथै तपाइँले उक्त ठाउँमा आफ्नो अकाउन्ट लगआउट गर्नुभयो की भएन भन्ने पनि जानकारी दिइएको हुन्छ । त्यहीँ साइन आउट अफ अल सेसन नामक अप्सन हुन्छ । सोही अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाइँले जहाँसुकै लगइन गरेर साइन आउट गर्न बिर्सिएको आफ्नो जिमेल अकाउन्ट साइन आउट हुन्छ । र, तपाइँले ढुक्कको सास फेर्न पाउनुहुनेछ ।
बिबिसी हिन्दि को सहयोग मा
हेडफोनमा R र L किन लेखेको हुन्छ ?
1,036 Views हेडफोन लगाएर गीत सुन्न रमाइलो हुन्छ । आजकल सबैको कानमा हेडफोन देखिन्छ । तर तपाइँले ख्याल गर्नु भएको छ ? हेडफोनमा R र L लेखेको हुन्छ ।
पक्कै गर्नु भएको छ होला । तपाइँलाई लागेको होला R भनेको राइट अर्थात दायाँ र L भनेको लेफ्ट बायाँ हो । तर कुरा त्यतिमा सीमित छैन ।
हामीले म्युजिक सुनेको बेला फरक कानमा फरक फरक म्युजिक आउने गर्छ । तपाइँ भिडियो हेरिरहनु भएको छ र भिडियोमा कारको बायाँपट्टी कोइ आउँदै छ भने त्यो म्युजिक तपाइँको बायाँ कानमा पहिले आउँछ । दायाँ पट्टी भएका गतिविधीको साउण्ड दायाँ पट्टी आउँछ ।
त्यति मात्र होइन साउण्ड सिष्टममा बायाँ पट्टी हुने सेन्सर बायाँ कानमा हुने हेडफोन र कानका सुन्ने कोशिका सँग म्याचिङ हुन्छ भने दायाँ तिरको भागमा पनि त्यसरी नै मिलाइएको हुन्छ ।
राइट र लेफ्ट गलत कानमा परेमा साउण्ड मिक्स हुने हुन्छ । यसले गर्दा तपाइँ साउण्ड क्लियर सुन्न सक्नु हुन्न ।
पाइलटले यात्रुलाई कहिल्यै नभन्ने ६ कुरा
773 Views विमानमा यात्रा गर्दा कुरा केही यस्ता कुरा हुन्छन् जो पाइलट यात्रुलाई कहिल्यै बताउँदैनन्। जब तपाई विमानमा सवार हुनुहुन्छ, पाइलट तथा फ्लाइट अटेन्डेन्ट केही जानकारी दिने गर्छन्, तर सोझै सबै कुरा भने बताउँदैनन्। यसको एक कारण हो, यात्रुको बिच डर नफैलियोस् र गलत कदम नचालुन्। विमानमा सवार हुँदा पाइलटले यात्रुसंग लुकाउने केही कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
१. व्यावसायिक विमानमा कुनै एक इन्जिन खराब हुँदा पनि सुरक्षित तवरले उड्न सक्छ। त्यसैले पाइलटले कहिल्यै पनि विमानको इन्जिन बिग्रेको बारे यात्रुलाई जानकारी गराउँदैनन्।
२. पाइलटले कहिल्यै पनि सफा देखिएको छैन भनि यात्रुलाई बताउँदैन्। यसको सट्टा ल्याण्डिङ गर्ने ठाउँमा कुहिरो लागेको भनेर पाइटलले भन्छन्। प्यासेन्जर नडराउनु भन्नको लागि यस्तो भनिने गर्छ।
३. यदि पाइलटले फ्लाइट अटेन्डेन्ट (एयर होस्टेस)लाई बस्ने अनुमति दिए बुझ्नुपर्छ कि विमानमा कुनै गम्भिर समस्या छ। यस्तोमा यात्रुलाई विमानको अवस्थाबारे अवगत नगराइन सक्छ।
४. फ्लाइटको बखत लगाएको हेडफोन हटाउन भनिन्छ भने यसको केवल एउटा अर्थ हुन्छ, पाइलटको निर्देश ध्यानसंग सुन्नु।
५. हावाहुरी वा चट्याङबाट विमान पार गर्दा पाइलटले केवल मौसम खराब रहेको जानकारी सुनाउँछन्।यरा हाइज्याक हुन्छ, जबसम्म सम्भव हुन्छ पाइटल यात्रुलाई हाइज्याकको बारेमा बताउँदैनन्।
नासाको जुनो भूउपग्रह वृहस्पतिमा पुग्यो
582 Views एजेन्सी: नासाले पठाएको जुनो भूउपग्रह सबैभन्दा ठूलो गृह वृहस्पतिमा प्रवेश गरेको छ। पाँच वर्षको अथकप्रयासपछि सौर्य परिवारमा रहेको ठूलो ग्रहमा जुनो भूउपग्रहरले सफलतापूर्वक प्रवेश पाएको नासाले जनाएको छ।
नासाका अनुसार ‘जुनो भूउपग्रह’ वृहस्पतिको कक्षमा पुगेको ३५ मिनेटमै इन्जिनमा आगो लागेको थियो। त्यो जलेको पूरै भाग पृथ्वीमा सोमबार आइपुगेपछि ‘जुनो भूउपग्रह’ वृहस्पतिमा पुगेको प्रमाणित भएको थियो।
‘जुनो भूउपग्रह’ वृहस्पतिमा पुगेपछि नासाको कन्ट्रोल रुममा कार्यरत वैज्ञानिकहरुले खुसियाली मनाएका छन्। उनीहरुले अमेरिकाको अर्को जन्म भएको बताएका छन्।
नासाका प्रशासन प्रमुख चार्ली बोल्डनले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्रताको खुसी हामी कहिलेकाहीँ मनाउँछौ । जुन वृहस्पतिमा पुगेको दिन आज अमेरिकाको पुनर्जन्म भएकोले ठूलो खुसी भित्रेको छ।’
उनका अनुसार जुनोले वृहस्पतिमा पुगेपछि त्यहाँको वातावरणबारे अनुसन्धान गर्ने, नयाँ कुराको खोजी गर्ने र विकिरणको अवस्थाबारेमा पत्ता लगाउने मात्र नभइ यसको उत्पति र हाम्रो सौर्यप्रणाली सञ्चालनबारे खोज गर्नेछ। यसका साथै जुनोले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सूचना आफ्नो ल्याब्रोटोरी कन्ट्रोल रुममा पठाउने नासाले जनाएको छ।
यता, ‘जुनो भूउपग्रह’ का प्रोजेक्ट म्यानेजर रिक निब्याकेनले ‘जुनो भूउपग्रह’ वृहस्पतिमा पुगेर उत्कृष्ट काम गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जुनोले राम्रो काम गर्नेछ, जसरी तपाईँले आफू चढेको गाडीलाई सही बाटोमा लिएर जानुहुन्छ।’
उनका अनुसार यो उपग्रह वृहस्पतिमा जानु नै सबैभन्दा गौरवको विषय हो । उनले आफ्नो टीमलाई अनुसनधानको काम गर्न त्यतिकै चुनौती पनि उत्तिकै रहको छ। उनले भनेका छन्,’हामी वैज्ञानिकहरुले खोजिरहेको र जान्न चाहेको विषयबारे चाँडै नै जानकारी दिनेछौँ।’
उनका अनुसार अर्को महिना, ‘जुनो’ मिसन र वैज्ञानिकको टीमले संयुक्तरुपमा यसको कामको मूल्यांकन गर्नेछ। यसका साथै वैज्ञानिक उपकरणहरुबारेमा पनि अनुसन्धान हुनेछ।
नासाले सन् २०११, अगस्ट महिनामा ‘जुनो स्पेशक्राफ्ट’लाई फ्लोरिडाबाट १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर खर्चमा पठाएको थियो।
सावधान ! अध्यारोमा स्मार्टफोन चलाउँदा यो अंगमा असर पर्छ
176 Views एजेन्सी ।
कतिपय अवस्थामा तपाइँलाई लुकी लुकी स्मार्टफोन चलाउने अवस्था हुन सक्छ ।
खासगरी घरमा बाबु आमा वा होष्टलमा वार्डेनले नदेखोस् भनेर अध्यारोमा बसेर फोन चलाउनु हुन्छ भने यस्तो बानी आजै देखि छोड्नुस् ।
अध्यारोमा स्मार्टफोन चलाउँदा घातक असर पर्ने एक अध्यनले देखाएको छ ।
न्यू इङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक शोधका अनुसार अध्याँरोमा स्मार्टफोन चलाउँदा पहिलो असर आँखामा पर्छ ।
अध्याँरोमा फोन चलाउनेहरुलाई दृष्टिको समस्या हुने समेत अध्यनको निष्कर्ष छ । यस्तो रोगलाई ‘ट्रान्जिएन्ट स्मार्टफोन ब्लाइन्डनेस’ को सज्ञा दिएका छन् ।
जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्ट भन्छ लगातार अध्यारोमा बसेर स्मार्टफोन चलाउँदा केही समयका लागि नदेख्ने अनि फेरि देखिने र पुनः त्यस्तै हुने रोग हुन सक्छ ।
माइक्रोम्याक्सले ल्यायो ६ भाषामा बोल्ने स्मार्टफोन
152 Views काठमाडौं: माइक्रोम्याक्सले युनाइट सिरिजको दुई नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। उसले युनाइट ४ र युनाइट ४ प्रो सार्वजनिक गरेको हो।
युनाइट ४ को मूल्य ११ हजार २ सय तीन र युनाइट ४ प्रोको मूल्य १२,००३ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ।
यसलाई अफलाइन स्टोरबाट साथै स्न्यापडिलबाट पनि खरिद गर्न सकिने छ।
खास कुरा यो छ की यो कम्पनी स्मार्टफोन हुनेछ जसमा इन्डस अपरेटिङ सिस्टम 2.० दिइएको छ। यसमा १२ क्षेत्रीय भाषाहरु समावेश गरिएको छ। यस्तै यसमा एप बजार र इन्डर टु एन्डस फ्री सर्भिस दिइनेछ। यसबाहेक उपभोक्ताले यो अपरेटिङ सिष्टममा ६ भाषा टेक्स र बोल्ने टेक्नोलोजीको महसुस गर्न सक्नेछन्।
यी दुई स्मार्टफोनमा दुई वटा सिम कार्ड सपोर्टका साथै फ्रंगरप्रिन्ट सेन्सर समेत जडान गरिएको छ। यसबाहेक यसमा ८ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा र ५ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
पाँच इन्चको एचडी स्क्रिन भएको यो समार्टफोनमा कमवेशी गर्ने स्पेसीफिकेशन राहिएको छ। यता, युनाइट ४ मा १ गिगाहर्ज क्वार्डकोड मिडियाटेक प्रोसेसरका साथमा एक जीबी र्याम समाहित छ।
यस्तै इन्टरनल स्टोरेजका लागि ८ जीबी मेमोरी राखिएको छ जसलाई माइक्रो एसडी कार्डमा ३२ जीबीसम्म बढाउन सकिन्छ। यसमा एन्ड्रोइडको नयाँ भर्सन मार्समेलोको मज्जा लिन सकिन्छ।
त्यसतै युनाइट ४ प्रोमा अलग्गै प्रोससर राखिएको छ। १.३ गिगाहर्ज क्वाडकोर स्पीडट्रम प्रोसेसर तथा २ जीबीभन्दा कम रहेको छ। यो फोनमा इन्टरनल मेमोरी १६ जीबीको रहेको छ।
माइक्रो एसडी कार्डको माध्यमबाट यसलाई ३२ जीबीसम्म बढाउन मिल्ने सुविधा समेत छ। यो सिरिजमा भने एन्ड्रोइडको ललीपप भर्न समावेश छ। कम्पनीले
छिट्टै मार्शमेलोको अपडेट गर्ने जनाएको छ। यसको ब्याट्री ३ हजार ९ सय एमएएच रहेको छ।
भर्ना मापदण्ड सफ्टवेयरमा
133 Views असार १०, २०७३- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ भर्ना हुन तोकेको मापदण्ड– विपरीत विद्यार्थी भर्ना गरिए रजिस्ट्रेसनमा समस्या आउने जनाएको छ ।
परिषद् बोर्डले विषय, न्यूनतम जीपीए र ग्रेडको आधार यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘परिषद्ले तोकेको यो आधारमा उच्च माविहरूले विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने हुन्छ,’ परिषद्का सदस्यसचिव नारायण कोइरालाले भने, ‘यदि कसैले नबुझेर वा झुक्किएर आधारविपरीत भर्ना लिएको भएमा सफ्टवेयरबाट स्पष्ट हुनेछ ।’ विद्यार्थीले उच्च माविमा जम्मा ६७ विषय छानेर पढ्न पाउने छन् ।
‘कति जीपीए र ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुन–कुन विषय पढ्न पाउने भन्ने आधार बनेसँगै सफ्टवेयरको विकास भइसकेको छ,’ सदस्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘कसैले झुक्काएर फाराम भराए वा भरेको भए पनि छानविन गर्नुपर्दैन, सफ्टवेयर सिस्टमले देखाउँछ ।’ परिषद्को देशभरिमा ११ क्षेत्रीय कार्यालय छन् । उच्च माविले ती कार्यालयमार्फत विद्यार्थी भर्ना भएको रजिस्ट्रेसन गराउने छन् । यदि कुनै विद्यार्थी आधारविपरीत विषय भरेको पाइएमा विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।